Mad Cars dia hazakazaka mahazatra mandritra ny minitra vitsy | Androidsis
Manomboka amin'ity taona 2021 ity isika amin'ny mahazatra ho an'ny lalao haingana izay hankafizanao toa adala miaraka amin'ny Mad Cars. Lalao freemium izay ananantsika avy amin'ny Google Play Store ary ahafahantsika mahatratra ny tsipika fahatongavana miaraka amin'ny fiara be indrindra.
Lohateny vaovao ho an'ny Android mandritra ny fotoana fohy Inona no anaovanao dia efa nahazo ny hevitrao ary isa salan'isa tsara, na dia tsy ny mitifitra balafomanga aza, satria ny lalao ataon'izy ireo dia mety indrindra amin'ireo fotoana mankaleo ireo, nefa tsy misy bebe kokoa. Andao hataontsika amin'ity «Fiara Crazy» ity.
1 Fiara adala amin'ny findainao
2 Mamoha fiara vaovao ao amin'ny Mad Cars
3 Fanina mandritra ny minitra vitsy
Fiara adala amin'ny findainao
Fiara tsotra Mad mitondra antsika amin'ny mekanika tena tsotra ary izany dia mifototra amin'ny fihetsika amin'ny sisiny mba hialana amin'ireo vato misakana rehetra ananantsika eny an-dàlana, na hanatonana fotsiny ireo fiara mijanona manaraka antsika.
Ny tiako holazaina dia inona miaraka amin'ny fihetsika amam-pitaovana dia handeha amin'ny ankavia isika ary miaraka amin'ny iray amin'ny ankavanana. Ary tsy misy intsony amin'ity vaovao tsy mahazatra Android ity izay tokony hitandremantsika ny boriborintany noforonin-tanana, satria tsy maintsy mampiasa ramp isika, hisorohana ny fipoahana, ny vatolampy ary ireo singa tsy fitoviana hafa izay hametraka antsika ao anaty fifamatorana fotoana maro.
El Tsotra ny fanaraha-maso ny fiara ary afaka mahay mihintsy aza isika hidina amin'ny lalana tery hitsambikina amin'ireo vatolampy na polisy izay miandry antsika hijanona hitondra antsika any amin'ny paositry ny polisy noho ny hadalan'ny fiaretanay.
Mamoha fiara vaovao ao amin'ny Mad Cars
Mad Cars dia miavaka ihany koa ho an'ireo vola madinika azontsika isaky ny ambaratonga ary ahafahantsika manampy vola hanalana fiara vaovao ho an'ny maro izay miandry antsika hanao izay hahafinaritra kokoa ny lalao.
Mazava ho azy, alohan'ny freemium, afaka isika sintomy ny dokam-barotra mba hampitomboina avo roa heny ny volamena mandresy amin'ny hazakazaka iray isika hahafahantsika mamoha ireo fiara rehetra ireo. Izahay koa manana ny doka 5-segondra izay vokarina isaky ny hazakazaka, ka raha tsara ho anao ity lalao ity dia tsy ratsy ny mandoa kely noho ny 1 euro fa lany ny fanafoanana ny doka rehetra.
Raha izany tavela ihany koa isika miaraka amin'ny fizika misy azy ary ireo vatolampy izay mivily lalana koa mba hahafantaranay izay rehetra mitranga. Azonao atao ihany koa ny mahita izany famolavolana haavo an-tànana izany izay hametraka antsika amin'ny fanandramana ary hatramin'ny voalohany dia misy ny fahasarotana ampy hamitahana antsika.
Fanina mandritra ny minitra vitsy
Tsy manala izany Mad Cars ho lalao minitra vitsy, fa farafaharatsiny fatratra. Eny, misy zavatra sasantsasany azo hatsaraina toy ny feon'ny hafainganam-pandehan'ny fiaranay, na dia manana fiara marobe miaraka amintsika aza isika amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miatrika ny fahaverezan'ny sasany hanohy hatrany isika.
Un lalao izay tsy dia ratsy mihitsy ny saryary toa ilay saga PAKO io, fa tsy inona izany fa tsy tokony hosoratana ao an-trano. Isika sisa tavela amin'ny famolavolan'ny fiarany sy ireo faritra misy vokariny izay hitondra antsika hamakivaky tontolo samihafa.
Mad Cars dia mahazatra amin'ny lalao haingana Manoro hevitra izahay avy amin'ireto andalana ireto amin'ny Androidsis mba hankafizanao toa ny dwarves ialana ny harambato, vatolampy goavambe ary ireo polisy ireo; ary singa hafa izay avelanay ao amin'ny mistery.
Izay ilainao amin'ny lalao haingana fotsiny.
Fiara maro hamaha
Ny feon'ny haingam-pandeha ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mad Cars dia lalao goavambe tena adala izay ampidirinao fiara amin'ny dianao
Ahoana ny fampiasana Apple AirPlay amin'ny Android tsy misy ROOT